လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူအပေါငျးတို့သကြော်ငြာနေသော်လည်းဖုန်းခေါ် မောရစ်ရှ စျေးဝယ်များအတွက်ပရဒိသုကြီးမားတဲ့လမ်းပိုင်းရှိနိုင်ပါသည်။ စျေးနှုန်းမူဝါဒသည်မတရားမှုဖွမြင့်မားတဲ့စျေးနှုန်းတွေမတူ, အဝတ်များ၏အရည်အသွေးတခါတရံအလိုရှိသောခံရဖို့သိပ်အရွက်ပေမယ့်ဖက်ရှင်တံဆိပ်များအတွက်အသုံးအများဆုံးအတုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင်တို့အပေါ်မှာအပျော်အပါး, အမည်ရကြွင်းသောအရာတွေနဲ့စီးပွားရေးပေါင်းစပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြလျှင်မူကား အပန်းဖြေစခန်း နှင့်စျေးဝယ်ကကျွန်း၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်ပိုင်ထိုက်သောနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရကျိုးနပ်သည်။ ဤသည်မောရစ်ရှစတိုးဆိုင်များအချို့ကိုစိတ်ကူးရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အခြေခံအားဖြင့် shopaholics များအတွက်ပရဒိသုအနည်းငယ်မြို့ကြီးများတွင်န်းကျင်အခြေခံသည်။ ညှိနှိုင်း, ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်နောက်တဖန်ညှိနှိုင်း: စိုးမိုးရေးအတွက်စျေးကွက်များနှင့်စျေးဆိုင်၌တည်၏။ သငျသညျအရာတန်ဖိုးရဲ့ 20 မှ 50% ပစ်နိုင်ပါတယ်။ မောရစ်ရှများတွင်စျေးဝယ် သင်သည်အရည်အသွေးမြင့် knitwear, cashmere ကျောက်မြတ်၏ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ကိုငါပေးမည်။
ကျနော်တို့ကကျွန်း၏မြောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, အဓိကအာရုံစူးစိုက်မှုမှရေးဆွဲနေသည် သည့်ဂရန်း Baie တစ်ဦးတရားမဝင်ခရီးသွားဧည့်ရေးစင်တာအရပ်၌ဤကတည်းကအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရာ။ အကောင်းဆုံးနေရာများက Grand Baie:
နေဝင်ချိန် Boulevard ။ ဌန်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူထူးခြားတဲ့လမ်းပေါ်ကစျေးဝယ်ရှုပ်ထွေး။ မြင့်မားသောစျေးနှုန်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ။
ဂရန်း Baie ပလာဇာ။ ဤသည်စျေးဝယ်စင်တာကျွန်း၏မြောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂရန်း-ဂလားပင်လယ်အော် Market က။ ဤအရာများကို၏အရည်အသွေးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးစိတ်ဆိုးလုပ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်း Baie ၏စျေးကွက်မှာတော့အဝတ်ကိုဝယ်ယူမှရှောင်ကြဉ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ သို့သော်ဤမဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး ရိုးရာအမှတ်တရပစ္စည်းများ နှင့်ထုတ်ကုန်။
စူပါ U. တစ်ဦးကကြီးမားကုန်တိုက်ကြီးစျေးဆိုင်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုပြီးရှိကြတယ်။
ဒါဟာမော်ရေးရှပ်၏မြို့တော်စျေးဝယ်များအတွက်အနည်းငယ်ကြီးမြတ်သောအရပ်တို့ကိုသတိပြုရကျိုးနပ်သည် ဆိပ်ကမ်းလူးဝစ် :
Caudan Waterfront ။ ဖက်ရှင်ကမ္ဘာ၏ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာများ၏အဝတ်နှင့်အတူအထူးစပါယ်ရှယ်ဝန်ဆောင်မှုရတာဟာအရာစျေးဝယ်ရှုပ်ထွေး။ တစ်ဦးလက်မှုပညာပစ္စည်းဆိုင်လည်းရှိပါတယ်။
le ဇားဗဟို။ မြို့တော်၏ဗဟိုဈေးကွက်။ လိုအပ်မယ့်ခရီးစဉ်ကို - သင်တစ်ဦးသည်အိန္ဒိယအသွင်နှင့်အတူထုတ်ကုန်များအတွက်ရှာဖွေရေးစဉ်းစားရခက်နေတယ်ဆိုရင်။
Bagatelle Mall က။ အဆိုပါကုန်တိုက်အနည်းငယ်ကီလိုမီတာမြို့တော်ကနေ Moca ၏သေးငယ်တဲ့မြို့တွင်တည်ရှိသည်။ ငါက high-quality branded ပစ္စည်းပစ္စယ၎င်း၏အိမ်ခေါင်မိုး nemerenoe အရေအတွက်ကိုအောက်မှာသိမ်းယူကြ၏။
အနောက်ပိုင်း နဲ့ တောင်ပိုင်း ကျွန်း၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်စျေးဝယ်များအတွက်အချက်များနှင့်ဝသကဲ့သို့ထူပြောနေတယ်မဟုတ်ပါဘူး မြောက်ပိုင်း ။ သို့သော်တောင်ကိုဒီမှာမောရစ်ရှ၏ဆိုင်များကိုသင်စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါနေရာများမှ၎င်း၏အာရုံကိုလှည့်သင့်ပါတယ်:
Quatre ဖွား။ သင်ချင်တယ်ဘာမှမဝယ်နိုင်မည့်မော်ရေးရှပ်အတွက်အဓိကမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်း။ ခေတ်မှီဆိုင်များ, ဖက်ရှင်ဆိုင်များနှင့်စျေးကွက်စိန့်ဂျင်း Street Journal နှင့် Trianon စျေးဝယ်စင်တာတွင်၏ဧရိယာ၌အာရုံစိုက်နေပါတယ်။ မြို့တိုင်းကြာသပတေးနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေဒေသခံတရားမျှတတဲ့ဖြတ်သန်းပါတယ်။
ဟေးလ်နှင်းဆီ ။ သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့တစ်ဦးမဖြစ်မနေကုန်စည်အမျိုးမျိုး၏စည်းစိမ်ကိုထိခိုက်အရှေ့ပိုင်းစတိုင်အတွက်စျေးကွက်ဖြစ်ပါသည် - နံ့သာများနှင့်စားသုံးဆီအနေဖြင့်ရတနာနှင့်အဖိုးတန်ကျောက်များဖို့။
Curepipe ။ မြို့တော်အပြီးဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့။ အဝတ်အခွန်လွတ်စျေးဆိုင်၏အကြီးစားအမျိုးမျိုး။
Floreal ။ စီးတီးသိမ်းသွားလေ၏။ ဗဟိုစတုရန်း၌သင်တို့ကိုသဘာဝပိတ်ထည်နှင့်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးသိုးမွှေးနှင့်ဖန်ဆင်းထုတ်ကုန်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
Mahébourg ။ Market က, အိန္ဒိယနှင့်မောရစ်ရှ၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူ imbued ။ နံ့သာမျိုး, ဆီ, ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Blend နှင့်ပိုပြီး - စစ်မှန်အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကုန်ပစ္စည်းများနိုင်ပါတယ်ဤနေရာတွင်ရှာဖွေပါ။
en FLAC flic ။ နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့ခရီးသွားဧည့်မြို့။ ပိုအမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်အဝတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဒီဇိုင်း ကမ်းခြေ ။
စည်းကမ်းကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောစျေးဆိုင် 9.00 ကနေ 17,00 တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့မှပွင့်လင်းကြသည်။ စနေနေ့တွင်တခါတရံကြာသပတေးနေ့, စစ်ဆင်ရေး 12,00 မှကန့်သတ်သည်။ တနင်္ဂနွေတွင်သာအကြီးတွေစူပါမားကက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
သင့်အနေဖြင့်ကျွန်းအခွန်၏ system ကိုအခမဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစျြလြူမရှုသင့်ပါတယ်။ ဝယ်သည်အတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအချို့ကိုအောက်ပါဖြင့်, သင်သည်ကုန်စည်၏တန်ဖိုး၏ 15% ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အဆိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုလွန်သွားပြီးနောက်သင်တာဝန်အခမဲ့ဇုန်အတွက်ရအလွန်အရာ။ ဒါဟာ catalog ကနေကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်ပူဇော်သူကိုစျေးဆိုင်နှင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များယုံကြည်စိတ်ချခံရဖို့ထို့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုလွန်ပြီးမှ, သင်တစ်ဦး "ဟု Poke အတွက်ဝက်" ကိုဝယ်ခြင်းငှါ, ထိုအရပ်ဘယ်သူမှဖြစ်နှင့်မျှမတို့အချိန်ရှိသည်ကြလိမ့်မည်တောင်းဆိုဖို့အန္တာရာယ်။
တန်ဇန်းနီးယား - အပန်းဖြေတစ်ရာသီ
ကင်ညာ - ကမ်းခြေအားလပ်ရက်
လတ်ဆတ်တဲ့ဂေါ်ဖီထုပ်သုပ် - စာရွက်
က Nicholas Sparks ဘဝနှင့်မဂ္ဂဇင်း HELLO သူ့ဝတ္ထုအကြောင်းလင်းလင်းအင်တာဗျူးကိုပေး၏,
Kris Jenner နှင့် Chloe Kardashian ကိုယ်ဝန်ခေါင်းစဉ်အပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုအဖြစ်မှန်ပြပွဲဖွင့်!
Menu ကိုသူနာပြုမိခင်များ - ဒုတိယလ
အူလမ်းကြောင်း colic - လက္ခဏာများ
နှစ်သစ်ကူး 2017 ၏ပုံရိပ်
ခြေထောက်ပေါ်ရောဂါ erysipelas - လက္ခဏာများ